क्याप्टेन एजी शेर्पा : जस्ले ७३ यात्रु सहित आफ्ना सहकर्मीलाई नयाँ जीवन दिए ! – Online Khabar 24
क्याप्टेन एजी शेर्पा : जस्ले ७३ यात्रु सहित आफ्ना सहकर्मीलाई नयाँ जीवन दिए !
एजी शेर्पा अर्थात् ७३ जना यात्रुको जीवन फर्काइदिने भगवान । ‘हामफाल्छौँ, नबाँचिनेरहेछ’ भनेर जीवन माया मारेर चिच्याउँने यात्रुको मुहारमा खुसी ल्याइदिए पाइलट एजी शेर्पाले ।
सोमबार काठमाडौं बाट विराटनगर उडेको बुद्ध एयरको जहाज अवतरण गर्न सकेन । उक्त विमान एजी शेर्पाले नै चलाएका थिए ।जहाज विराटनगरतिर उड्दा सामान्य नै भएपनि विराटनगर पुगेपछि समस्या देखियो । अवतरण गर्न सकेन । जहाजमा वयस्क ६८, बच्चा २, अपांग ३ जना गरि ७३ जना यात्रु रहेका थिए ।
भगवान दाहिने हात भइदियो । जहाज सकुशल रुपमा अवतरण गर्यो । यो अवधिभर जहाजमा केही यात्रु बेहोस पनि भएका थिए । र, सबै यात्रुले नयाँ जीवन पाए, एजी शेर्पाले सबैलाई मृत्युको मुखबाट बचाएर नयाँ जीवन दिए । साभार गरियको खबर
Prev‘म ड’रा’एको भए जहाज बीचमै ख’स्थ्यो होला, तर मैले आशा मा’रे’को थिइनँ’
nextयिनै हुन् २२ वर्षका युवक सागर जसको बोल्दा बोल्दै आँखा अगाडी मृ’त्यु भयो !